Published April 23, 2021 at 9:31 PM CDT
Warqad loodirayo waalidka kormeeraha guud ayaa lagu sheegay in rugaha caafimaadka aysan u furi doonin dadweynaha, laakiin loo fidiyay ardayda iyo shaqaalaha degmada.
Tallaalku waa ikhtiyaari.
Lt. Governor Adam Gregg ayaa galabnimadii kaqeyb galay rugta talaalka oo kutaala Xarunta Siouxland Expo Center. Qofka u dhashay Hawarden waxaa ku soo biiray xiddigga NFL ee hawlgab Dallas Clark. Labadooduba waxay ku qaateen talaalkooda magaalada Sioux City. Clark, oo ah Iowa dhalasho ahaan, wuxuu u ciyaaray Indianapolis Colts. Labaduba waxay isku dayayaan inay dad badan ku dhiirrigeliyaan inay qaataan tallaalka.
Subaxaan ISU Fidinta iyo fidinta oo ay weheliso Hay'ada Waxqabadka Bulshada waxay martigalisay deeq raashin ah oo kuyaala goobta la dhigto ee Lewis iyo Clark Stadium.
In kabadan 1,250 sanduuq oo raashin ah ayaa loo qeybiyay qeyb ka mid ah Barnaamijka Sanduuqa Cuntada ee "Beeraleyda Qoysaska" ee USDA. Sarkaal ayaa leh dad badan oo ka tirsan bulshadayada ayaa la halgamaya dhibaatooyin ka dhashay cudurka faafa ee COVID-19.
Barnaamijka kaalmadu waa qayb ka mid ah Barnaamijka Kaalmada Cunnada ee Coronavirus.
Suuqa Beeraleyda Magaalada Sioux wuxuu qorsheynayaa inuu u furmo ganacsi 8 subaxnimo Arbacada 5ta May meesha baabuurta la dhigto ee galbeedka Xarunta Dhacdooyinka Tyson. Suuqa sidoo kale wuxuu furnaan doonaa Sabtida ilaa dhamaadka Oktoobar.
Iyo, maanta Maktabada Dadweynaha ee Magaalada Sioux ayaa shaacisay in bartamaha magaalada ay kusoo laaban doonto saacadaha caadiga ah Isniinta, Maajo 3deeda. Maktabaddu waxay rajeyneysaa inay sii wado ku darista waxyaabo badan bilaha soo socda. La-taliyaha ayaa lagu dhiirrigelinayaa inay ku dhaqmaan kala fogaynta bulshada oo ay ku koobaan waqtigooda maktabadda illaa hal saac. Maaskarada ama wejiga la daboolo ayaa loo baahan yahay.
Waaxda Caafimaadka Bulshada ee Iowa waxay diiwaangelisay lix dhimasho oo kale gobolka oo dhan sababo la xiriira dhibaatooyinka COVID-19 oo ay la socdaan…